people Nepal » कस्ता खालका युवतीहरु छिट्टै यौन सम्बन्ध राख्न तयार हुन्छन् ? कस्ता खालका युवतीहरु छिट्टै यौन सम्बन्ध राख्न तयार हुन्छन् ? – people Nepal
कस्ता खालका युवतीहरु छिट्टै यौन सम्बन्ध राख्न तयार हुन्छन् ?
युवतीहरुमा यौन चाहना भएपनि पुरुषहरु जसरी उनीहरु यौनसम्पर्कका लागि चाडै तयार हुदैनन्। तर नेट चैटिंग पछि भेट्ने हरु भरसक त्यसै दिनमा सेक्स गर्छन। यो अनुपात दैनिक भेट्ने हरुमा धेरै समय लाग्ने गर्छ र सेक्स को लागि त बर्षौ कुर्नुपर्ने हुन्छ। हाल सालै एउटा फिटनेस पत्रिका द्वारा गरिएको सर्वे मा विभिन्न सोशल नेटवर्किंग साइट्स बाट चिनजान हुने पाँच महिलाहरुमा चार महिलाहरुले र पाँच पुरुष हरुमा तीन जनाले अनलाइन पार्टनर हरु संग निकै थोरै समयमा सेक्स भएको रिपोर्ट निकालेको थियो।
बिज्ञहरुका अनुसार यो सर्वेले यी बिज्ञ हरुलाई हैरानीको सट्टा उनीहरुको अनुमानलाई सहि बनाएको छ । बिज्ञ भन्छन मानिसहरु जब भर्चुअल रिलेशनशिपमा हुन्छन उनीहरुको बीचको दुरी असध्य कम हुने गरेको छ र यो दुरी कम हुन अति नै छोटो समय लाग्ने गर्छ । खासगरी दैनिक भेटघाट हुने जोडीमा कतै न कतै अलि लाज रहेकोले सेक्सको बारेमा बात मर्न निकै समय लाग्ने गर्छ ।